xTra Masala – Daily New Masala …..
Daily New Masala …..
यी तस्बिर सेयर गर्दै “तपाईं डराउनु हुन्न भने म संग आउनुहोस” भन्छिन अभिनेत्री सोनल चौहान।
April 2, 2021 xtramasala
“चालीस पटक सम्म गर्दा पनि कोरियोग्राफरले हुन्न भनेपछि” नायिका प्रियंका चोप्रा ले यसरी सबै कुरा खुलाइन।।
दुब्लोपनले हैरान हुनुभयो? तौल बढाउनको लागि १०० प्रतिशत प्रभावकारी आयुर्वे्दिक घरेलु उपाय जान्नुहोस ।
बलिउडकी चर्चित बेलि डान्सर नोरा फतेहि को ह,ट फि,गरले तान्यो संसारको ध्यान हेरौ यी (तस्बिरमा)।
April 1, 2021 xtramasala
त,नाब बाट बाहिर निस्कन मुस्कान नै महत्वपूर्ण हुन्छ। भन्ने सदाबहार शुन्दर देखिने नायिका नम्रता श्रेष्ठ का हेरौ मनै लोभ्याउने (तस्बिरहरु)
बलिउड अभिनेत्री श्वेता तिवारि ले तेस्रो बिहे गर्छु भन्दा मानिसहरु ट्रो,ल गर्दै भन्न थाले “तिम्रो छोरिले अब5पटक बिहे गर्छिन।
बलिउड अभिनेत्री सोनल चौहान अक्सर आफ्नो बोल्ड तस्वीरहरु सोशल अभिनेत्री तथा मोडल सोनल चौहान पछिल्लो समय फिल्म उद्योगबाट टाढा छिन् । तर सामाजिक सञ्जालमा उनी सक्रिय नै देखिन्त्छिन् । उनका हट तस्विरहरु अहिले इन्टरनेटमा भाइरल भइरहेका छन् । सोनल चौहान
बलिउडमा मात्रै नभएर प्रियंका चोपडा विश्वभर चर्चामा रहेकी छिन् । उनको एक पुरानो अन्तर्वार्ता सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । अभिनेत्री चोपडाले आफ्नो करियरको शुरुका दिनहरूको बारेमा कुरा गरेकी छिन् । प्रियांकले सन् २००३ को ‘अन्दाज’ बाट मुख्य अभिनेत्रीको रूपमा
कोहि व्यक्ति जस्तो खाना खाए पनि फुर्तिलो, बलियो, जाँगरिलो र मोटो हुन्छ भने कोहि व्यक्तिहरु भने जति सुकै प्रोटिनयुक्त वा सन्तुलन खाना खाए पनि एकदम दुब्लो, पातलो र कमजोर हुन्छ।बिहानको खाजा देखि बेलुकाको भोजन सम्म मिलाएर खाँदा पनि अत्ति नै
बलिउड चलचित्र हेर्ने जो कोहिको मन मुटुमा राज गर्न सफल अभिनेत्री हुन्, नोरा फतेही। उनी अभिनेत्री मात्रै नभई एक सफल गायिका पनि हुन् । उनी सामाजिक संजालमा पनि निकै सक्रिय रहेकी छिन्। उनले २०१४ मा हिन्दी फिल्म ‘टाइगर अफ द
नम्रता श्रेष्ठ वि-वादित तर सधै चर्चामा रहन सफल नेपाली अभिनेत्री हुन् । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय नम्रता गतबर्ष रिलिज भएको चलचित्र ‘जाइरा’पछि नम्रता नयाँ चलचित्र ‘प्रसाद २’मा काम गरिन्नम्रतालाई भर्सटायल नायिकाको रुपमा चिनिन्छ । साथमा, उनको सुन्दरताको चर्चा पनि सधैचलचित्र ‘प्रसाद
टिभी अभिनेत्री श्वेता तिवारीले हालसालै आफ्नो अन्तर्वार्तामा उनको टुक्रिएको विवाहको बारेमा ग,म्भीर खुलासा गरेकी छिन्। श्वेताले घरेलु मिलाप नहुनाको कारण आफ्नो बैबाहिक सम्बन्ध दुई पटकसम्म बि,ग्रेको र अब तेस्रो पटक बिहे गर्ने कुरा गर्दा मानिसहरुले श्वेता लाई नानाथरी कुरा काते
सारा अली खानले ब्याकलेस ब्लाउजमा हट फोटोशूट गरिन, प्रयोगकर्ताहरूले सोधे-” यसलाई कसरी लगाउने हो?”
२०७७ चैत १९ गते बिहिबार ०१:५५ बलिउड अभिनेत्री सारा अली खान उनको पछिल्लो फोटोशूटको लागि सोशल मीडियामा लोकप्रिय छ। साराले फेशन डिजाइनर मनीष मल्होत्राको पछिल्लो संग्रहको लागि एक जबरदस्त फोटोशूट गरेकी छिन, जसमा उनी धेरै सुन्दर देखिएकि छिन्। …
आजको राशीफल यी राशीलाई लगानीमा लाभ हुने ।
मेष टाढाबाट राम्रो समाचार प्राप्त हुनेछ। पाहुनाहरू घरमा आउने छन्। आत्मविश्वास बढ्नेछ। जोखिम लिन साहस गर्न सक्षम हुनेछ। व्यापार मा लाभ हुनेछ। लगानी शुभ हुनेछ। बच्चा पक्ष बाट, स्वास्थ्य र अध्ययन को बारे मा चिन्ता हुनेछ। दुष्टबाट टाढा रहनुहोस ।
के तपाईलाई थाहा छ किन महिलाको शर्टको बटन बायाँ तर्फ हुन्छ?
March 31, 2021 xtramasala
के तपाईंले कहिल्यै याद गर्नु भएको छ कि केटाहरू र केटीहरूको शर्टको भिन्न भिन्नै साइडमा बटनहरू हुन्छ । यदि तपाईंले ध्यान दिनु भएन भने, अब तपाईंले ध्यान दिनुहुनेछ। वास्तवमा, महिलाहरुको शर्टमा बटन बायाँ तर्फ हुन्छ, जबकि पुरुषको शर्टमा बटन दायाँ
Categories Select Category मनोरञ्जन राशिफल रोचक खबर स्वास्थ्य
The Best Third Party Stylus and Apple Pencil Alternatives for iPad
Himalaya Online @